Isa 49; 1-6: NY MPANOMPON'I JEHOVAH
1- Olona efa voatendry
2- Olona omeny hery sy fahefana (and 2,3,6)
Asa 13:44-48: Ny FITORIANA NY FILAZANTSARA
1- Inona no filazantsara toriana (and 44,46)
a- Ny tenin'Andriamanitra
b- Ny famonjena
2- Iza no hitoriana ny filazantsara (and 46)
a- Jiosy (tafika masina anatiny)
b- Jentilisa (tafika masina ivelany)
3- Aiza no gitoriana ny filazantsara ? (and 46a, 47b)
a- eo amin'izay akaiky antsika
b- eo amin'izay lavitra antsika koa
Lio 3, 1-6: NY FAHEFANA HOMENA NY MPANOMPON'ANDRIAMANITRA
Ny perikopa telo dia samy miresaka momba ny fitoriana ny filazantsara fa amin'izay maha alahadin'ny Fifohazana FFPM ity andro ity no isafidiananamanokana ny Lio 3,1-6. Raha mitenyhoe fifohazana dia misy sokajin'olona tonga ao an-tsaina (Mpiandry). Tsy ny Mpiandry ireo akory no atao hoe Fifohazana fa iray amin'ny sikajy mandrafitra azy ny Mpiandry. Nomena fahefana manokana mantsy ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Ndeha ho jerentsika eto ary ny hoe "Ny fahefana homena ny mpanompon'Andriamanitra".
1- Fahefana voatokana (and 3).
Mitanisa anaran'olona manana fahefana teo amin'ny firenena i Lioka. Nataony mifanindran-dalana amin'izany koa ny anaran'i Jaona. Mampametram-panontaniana ny hoe: fahefana manao ahoana loatra no nananan'i Jaona no dia nataon'i Lioka mifanaraka amin'ireny andriandehibe teo amin'ny firenena ny anarany?
Valiny: fahefana voatokana io fahefana io satria
- fahefana avy amin'Andriamanitra.
Tsy mba fahefana nodimbiasana na nolovaina tamin'ireo ray aman-dreny teo aloha tahaka ny an'ireo olona voatanisa eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa ny fahefana nananan'i Jaona fa fahefana natolotr'Andriamanitra mihitsy no noraisiny.
- fahefana hanao ny asan'Andriamanitra: ny hanao batisa mba handraisan'ny olona famelan-keloka no asan'i Jaona. Fahefana voatokana ho an'Andriamanitra tokoa mantsy ny mamela heloka. Izany indrindra no nahatonga ireo lohandohan'ny Jiosy tezitra tamin'i Jesoa, ka nilazany Azy ho mpiteny ratsy an'Andriamanitra noho Izy manolotra famelan-keloka. Fahefana voatokana no atolotr'Andriamanitra ho an'ny mpanompony. Efa voaoman'Andriamanitra sy voatendry ho azy hatrany am-bohoka izany. "Ary ankehitriny, hoy Jehovah, Izay namorona Ahy hatrany am-bohoka ny Mpanompony," (Isa 49,5).
Ry mpanompon'Andriamanitra, izay manana zara fanompoana voatokana, tsarovy fa fahefana voatokana ny nomena'Andriamanitra antsika, fahefana efa nomaniny hatrany am-bohoka mba hanantanterahana ny asany. Hanohy ny asam-pamonjena izay nataon'i Kristy Jesoa no tohizantsika mpanompo nofidiny koa. Hoy tokoa mantsy Jesoa hoe "ny asa ataoko no ataony koa". Miavaka, voatokana, masina ry havana izany fahefana nomen'Andriamanitra izany satria avy Aminy ary Asany no tanterahantsika.
2- Fahefana tsy manavakavaka (and 5)
Ny lohasaha rehetra hototofana, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra haetry, ary ny meloka hahitsy, ary ny lalana mikitoantoana hohamarinina. Fanoharana no hanehoana ny asa tanterahan'i Jaona ilay Mpialoha lalana an'i Kristy. Fahefana tsy manavakavaka no atolotra azy. Na lohasaha, na tendrombohitra, na meloka, na lalana mikitoatoana dia samy tsy avahana ka kitihana avokoa. Izany hoe: na lohasaha (be vokatra, mpanan-karena), tendrombohitra (avo, be voninahitra, olona ambony), na meloka (izay manao ny tsy marina), na ny ny mikitoantoana (lalana mba azo andehanana tsara ihany fa manana ny faharatsiany, olona azo heverina ho mendrika nefa mbola ahitan-tsiny, ireo izay mbola miadaladala) dia tenenina avokoa. Olona nomen'Andriamanitra fahefana hiteny amin'ny fahasahiana ny Mpanompon'Andriamanitra. Hoy Isaia mpaminany hoe :"Ary natao tahaka ny sabatra maranitra ny vavako; Ary nataony zana-tsipika voalambolambo tsara Aho" (Isa 49,2).
Nomen'Andriamanitra fahefana ny mpanompony. Fahefana tsy manavakavaka na manana hena-maso hiteny olona sy hanitsy amin'izay tsy mety rehetra. Misy mpanompon'Andriamanitra misedra olana any anatin'ny Fiangonana any. Mety ho tahotra ny tsy handray fivelomana. Ao koa ireo mpanan-karena na olona ambony, na saranga hafa mitady hifehy ny fiangonana. Tsarovy ry mpanompo namana fa fahefana tsy hanavakavahana no ho misy hena-maso no nomen'Andriamanitra antsika. Mijoroa sy sahia, ampiasao araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fahefana nomena anao ao amin'izay sehatra ijoroanao vavolombelona sy andraisanao andraikitra (Diakona, Katekista, Mpitoriteny, ...).
Araka izany, ny fahefana nomena ny mpanompon'Andriamanitra dia fahefana tsy hitsitsy fananarana sy fitenenana eo amin'izay tsy mety ataon'ny olona. Fahefana voatokana io satria Andriamanitra no nanolotra azy fa tsy olombelona, ary asan'Andriamanitra no hatao. KOa mahereza ry mpanompon'i Jesoa Kristy, ampiaro ny fahefana natolotra antsika na dia hiafara amin'ny fanapahan-doha tahaka izay nahazo an'i Jaona aza. AMENA.